Ogaden News Agency (ONA) – Xukuumada Wayaanaha oo Jawaab Liidata Kabixisay Ansixintii Qararkii HR 128.
Xukuumada Wayaanaha oo Jawaab Liidata Kabixisay Ansixintii Qararkii HR 128.
Posted by Dulmane	/ April 12, 2018
Xukuumada Gumaysiga Itoobiya ayaa jawaab aad diciif u ah kabixisay ansixintii qaraarkii HR 128 ee xildhibaanada Maraykanku ay codka aqlabiyada leh ku ansixiyeen, kaas oo kadhan ahaa xukuumada wayaanaha iyo cawaanta lashaqaysa.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasiir kusheega arimaha dibada ee wayaanaha ayaa lagu sheegay in ay xukuumada Itoobiya aad uga xuntahay wixii kadhacay golaha Congress-ka Maraykanka iyo ansixintii qaraarkii HR 128.
Wasiirka Arimaha Dibada ee xukuumada Gumaysiga ayaa sheegay in dowlada Maraykanku ay ku dag dagtay ansixinta qaraarkaas, isagoo sheegay in ay mar hore dowlada Maraykanka kacodsadeen in lajoojiyo kadoodista qaraarkaas isla markaana ay badali doonaan dhaqan koodii.
Wasiir kusheega ayaa intaas raaciyay in ay wax badan badashay xukuumada wayaanuhu isla markaana hada wax badan lawanaajin doono, wuxuuna intaas raaciyay in isbadal dartii loo riday xukuumadii hore mid cusubna lakeenay.
Sidoo kale Wasiir kusheega wayaanaha ee Arimaha Warfaafinta oo waraysi bixiyay ayaa isna sheegay in lagu dag dagay ansixinta qaraarka HR 128, isagoo xusay in ay aad ooga xun yihiin, sidoo kale wasiir kusheega Warfaafinta ayaa sheegay in dowlada Maraykanka ay kafilayaan wada shaqayn wanaagsan iyo is ixtiraam, taas oo lafasishay cabsi uu kaqabo dowlada Maraykanka.
Dhinaca kale waxaa ansixinta qaraarka HR 128 siwayn usoo dhaweeyay dadwayne aad ubadan oo Itoobiyaan ah iyo waliba hay’adaha xuquuqul insaanka, waxayna dowlada Maraykanka ka codsadeen in ay hirgaliyaan qaraarka.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa lagu wadaa in ay wax badan kuwaydo ansixinta qaraarkan waxaana la qiyaasayaa in ay siyaasiyiinta wayaanuhu kacaagaan Maraykanka iyo wadamada ay saaxiibka yihiin.